FISOROHANA NY FIHANAKY NY “CORONAVIRUS” : Tafakatra 57 hatreto ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina Covid-19
Araka ny fanambaràna nataon’ny Filoha Andry Rajoelina, ny sabotsy lasa teo, dia notontosaina omaly teny amin’ny CCI ivato sy tetsy amin’ny Jumbo Score Ankorondrano ny andiany voalohany amin’ny fanaovana fitiliana ireo mpandeha tonga avy any ivelany. 1er avril 2020
Nanotrona izany teny an-toerana ny Filoham-pirenena mivady. An’arivony ireo niatrika fitiliana ahazoana valiny ao anatin’ny fotoana fohy na “Test de diagnostique rapide” ka ao anatin’ny 20 minitra dia fantatra ny valin’ny fitiliana. Olona avy any ivelany nanomboka tamin’ny 11 marsa lasa teo.
Marihina fa efa niatrika fihibohana nandritra ny 14 andro izy ireo, ary tsy maintsy hatao fitiliana farany mba hahafantarana ny toe-pahasalamany. Tanjona ihany koa ny hifehezana ny fihanak’ity valan’aretina “Coronavirus” ity eto Madagasikara. Aorian’ny fitiliana no ahafahana mahafantatra ny toe-pahasalaman’ireo olona tonga avy ivelany ireo, ireo izay voamarina fa tsy mitondra an’ilay tsimok’aretina dia mahazo taratasy fanamarinana avy amin’ny fanjakana ary afaka miverina soa aman-tsara eny anivon’ny fiaraha-monina.
Ho an’ireo hita fa mitondra ny tsimok’aretina kosa indray dia mitohy ny fandraisana an-tanana an’izy ireo ho fanaraha-maso ny fahasalamany. Omaly hariva tamin’ny 7 ora no saika fantatra avokoa ny valin’ny fitiliana nataon’ireo olona ireo. Araka ny antontan’isa ofisialy nomen’ny Filoham-pirenena dia nisy 731 ireo notiliana teny amin’ny CCI Ivato, ka ny efatra tamin’ ireo no voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina. Tetsy amin’ny Jumbo Score Ankorondrano kosa dia iray tamin’ireo voatily no voamarina. Araka ny efa nambaran’ny Filoha dia haharitra telo andro ity fitiliana faobe ity. Nilaza ny Filoha fa ahafahana mandrefy ny fahafehezan’i Madagasikara na tsia an’ity valanaretina ity ny fahafantarana ny valin’ireo fitiliana rehetra.
Ankoatra ny fitiliana faobe dia mitohy hatrany ihany koa ny fanaovana fitiliana eny amin’ny “Institut Pasteur” hitiliana an’ireo olona nifanerasera tamin’ireo olona avy any ivelany sy ireo izay misy soritr’aretina, ary ireo manaraka fitokana-monina any an-trano. Nisy 588 izy ireo nanaovana izay fitiliana teny izay omaly ary roa no hita fa mitondra ny tsimok’ aretina. Araka izany dia nahatratra dimy ireo olona voamarina fa mitondra ny voamarina fa mitondra tsimok’aretina Covid-19 taorian’ireo fitiliana faobe natao omaly ary roa kosa ho an’ny fitiliana teny amin’ny Institut Pasteur, izany hoe misy ny fito ny totaliny. Raha ny antontan’isa ofisialy navoakan’ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina dia mahatratra 57 hatreto ireo olona mitondra ny tsimok’aretina eto Madagasikara, omaly hariva.